नयाँ बसपार्क याैनबजारः रात परेसँगै प्रहरीकै अगाडि यस्तो बार्गेनिङ – भिडियोमै हेर्नुस् – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > नयाँ बसपार्क याैनबजारः रात परेसँगै प्रहरीकै अगाडि यस्तो बार्गेनिङ – भिडियोमै हेर्नुस्
admin June 13, 2019 June 13, 2019 जीवनशैली 0
काठमाडौं । रत्नपार्क राजधानीको मुटु हो । यहाँ अफिस टाइम तथा साँझको समयमा मानिसहरुको बाक्लै रुपमा हिँडडुल गर्छन् । फुटपाथमा साना पसल थाप्नेदेखि घर फर्कन गाडी कुर्नेहरुको लाम पनि रत्नपार्कमा देखिन्छ । केही वर्षअघि अहिले सञ्जालमा लोकप्रिय मुकुन्द घिमिरे उर्फ ‘मुकुन्दे’ले रत्नपार्कलाई कमाइ खाने भाँडो बनाएका थिए । उनी रुखमा बसेर भाषण गर्थे । उनको भाषण सुन्ने मानिसहरुको भिड नै लाग्थ्यो त्यहाँ । तर, अहिले पाँचसात वर्षअघिको रत्नपार्क छैन । फेरिएको छ ।
रत्नपार्कका तीन दृष्य
‘मैले वि:षादी सेवन गरे अब म बाँ:च्दिन होला’ भन्दै प्रेम बिबाह गरेको २ दिन मै २८ वर्षिय यी युवाले गरे दे’ह त्या’ग !
जति प्रयास गर्दा पनि किन बच्चा बस्दैन ? कारण यस्तो हुन सक्छ एकचोटी अवस्य पढौं